Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Nokia in Nexus 5
> Resource > Transfer > Transfer Xiriirada ka Nokia in Nexus 5 Si fudud
Nexus The Google 5, u sameeyey waxa muhiim, waa sida telefoonka cajiib ah Android, soo maaha? Haddii aad ku cusub tahay Nexus 5, waxaa laga yaabaa in aad si togan qarxaya u sheeg saaxiibadaa ku saabsan. Nasiib darro, waxaad ka jaftaa xiriir app aad Nexus 5 oo keliya si aad u ogaato in dhammaan dadka ay khuseyso weli ku saabsan telefoonka jir Nokia, sida Nokia 5800. xun weli, tan iyo xiriirada badan yihiin kaadhka SIM ah qaban karin, waxaad iyaga ku badbaadin telefoonka . Taasi micnaheedu waa in, ma waxaad qaadan kartaa kaarka SIM iyo geli on your Nexus cusub 5.
Waxaa la go'aamiyey in nooca xiriirrada iyo taleefan lambarrada mid mid? Jooji in. Waa mid aad u waqti lumis. Markaas, sidee ayaad u gaaro this? Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin, Wondershare ayaa sii daayay barnaamij lagu kalsoonaan karo - ka Wondershare MobileTrans . Waa barnaamij smart iyo hal-click telefoonka kala iibsiga, taas oo kuu oggolaanaysa in aad nuqul ka xiriirada ka Nokia in Nexus 5 1 click. Info waxay ku faahfaahsan, sida magaca shirkadda, cinwaanka email iyo cinwaanka guriga, la soo guuriyeen doonaa oo badbaadiyey on your Nexus 5 iyo sidoo kale lambarada telefoonka.
Download Barnaamij ku saabsan PC Windows oo la siiyo shot a.
Tallaabada 1. Orod barnaamijka kala iibsiga telefoonka ku PC Windows ah
Si aan ku bilaabo, rakibi oo ay maamulaan barnaamijka kala iibsiga telefoonka - Wondershare MobileTrans ku PC Windows ah. Markaas, waxaad ka heli ay fudud iyo user-friendly uu furmo suuqa hoose.
Tallaabada 2. Isku aad Nokia oo Neuxs 5 ilaa PC Windows ah
Isticmaal laba USB fiilooyinka in ay ku xidhmaan labada telefoonka Nokia oo Nexus 5 ilaa PC Windows ah. Your labada telefoonada la ogaan doonaa oo u muuqda in uu furmo suuqa hoose. Inta u dhaxaysa telefoonada waa ka kooban, taas oo ka mid ah kuwa ay taageerto ayaa la hubinayaa. Haddii aad rabto in aad kaliya si ay u gudbiyaan xiriirada, waxaad u baahan tahay inaad uncheck ka kooban kale.
Fiiro gaar ah: Wondershare MobileTrans ayaa si buuxda u la jaan qaada qalabka Nokia socda Symbian 40, Symbian 60 iyo Symbian ^ 3, Windows 8 iyo Windows 8.1. Si aad u soo xidhiidhaan telefoonka Windows wareejiyo qalabka kale, fadlan gurmad xiriiro si ay u OneDrive aad Windows Phone hore. Markaas Mobiletrans Wondershare taageeri kartaa in la soo celiyo gurmad ay u phone bartilmaameedka.
Tallaabada 3. xiriirada ka dhaqaaq Nokia in Nexus 5
Markii wax walba waa diyaar, riix Start Copy inuu ku soo bilowdo kala iibsiga xiriir ah. Is ogow in aanad barkinta Ama telefoon. Ka dib markii ay suuqa kala iibsiga xiriir ah, riix OK in la xiro suuqa kala pop-up nidaamka.
Dhab ahaantii, ma aha oo kaliya ee Wondershare MobileTrans kuu ogolaanaysaa inaad ku wareejiso xiriirada Nokia in Nexus 5, waxay awood inaad nuqul ka dhan xiriirada ka Nexus 4 ilaa 5 Nexus iyo dhaqaaqo xiriirada iPhone in Nexus 5 .
Download Wondershare MobileTrans ah oo isku day inaad kaligaa!
Ka dib markii Nokia ay u Nexus 5 xiriir kala iibsiga, waxaad isku dayi kartaa Wondershare MobileGo for Android si ay u maareeyaan xiriirada, barnaamijyadooda, fariimaha qoraalka ah, sawiro, muusig iyo cajallado fiidyow ku saabsan Nexus 5 ka computer si fudud.